UFix nomyeni wakhe asebenza naye bayashiya emsakazweni | Scrolla Izindaba
UFix nomyeni wakhe asebenza naye bayashiya emsakazweni
Ngemuva kweminyaka eyisishiyagalolunye njengophathina, abaphathi bohlelo lwasemsakazweni oludumile uRob Forbes no-‘Fix ‘Moeti bashiya i-5FM.
UForbes owaqala ukusebenza ku-5FM ngowezi-2012 uthe esitatimendeni sezokuxhumana ethi ubelokhu icabanga ukushiya selokhu kuqale unyaka wezi-2020.
Lesi sitatimende esihloko sithi-‘Saying goodbye to The Forbes and Fix show’ sithe kwakuyinjongo ayezibekele yona ukuba nohlelo lomsakazo lwasemini ku-5FM.
Uthe bekuwumgomo ofezekile kodwa ngemuva kwamahora angaphezu kwayizi-7,000, bese kuyisikhathi sokuthi babeke ngokugcwele izintambo kwezokusakaza. Uthe leli bekuyicebo, ngokubonisana nabaphathi be-5FM, kusukela ekuqaleni konyaka wezi-2020.
“Ukusakaza ngesikhathi somvalelo kube ngomunye weminyaka ethakazelisa kakhulu esibe nayo futhi ngiyajabula ukuthi sikwazi ukuba yingxenye yawo,” esho.
UForbes uthe usethatha umhlalaphansi ngokuphelele emsakazweni, wathi ukujabulele ukuthi ekugcineni akwazi ukwenza izinto azihlelile.
Ubuye asebenzise izinkundla zokuxhumana, uFix Moeti ubhale ukuthi ngemuva kokusakaza amahlandla ayizi-2 432 sekuyisikhathi sokulahla imakrofoni.
“Umsebenzi wami wokuba uDJ womsakazo waqala ku-5FM ngowezi-2008 ngohlelo olwalubizwa nge-Best Of 5. Kamuva lushaya lathola i-Friday Night Fix Dance Show ne-Tuesday Night Pop Show.”
Uthe washiya ukuyosabalalisa izifiso zakhe eMelika kwathi uma ebuya, kwavuselelwa uhlelo lukaForbes noFix.
Ubonge ‘umyeni wakhe osebenzayo’ uRob Forbes. Ugqugquzele abesifazane emsakazweni ukuthi baqhubeke nokufeza amaphupho abo yize kungaba nzima kangakanani.
Umthombo wesithombe: @ News24